तपाईंको अनलाइन पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न तीन उत्तम वेबसाइटहरू क्रिएटिव अनलाइन
तपाईंको अनलाइन पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न तीन उत्तम वेबसाइटहरू
यदि तपाई आफूलाई चिनाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईले तपाईको पोर्टफोलियो सिर्जना गर्नुहोस्, तपाइँको उत्तम कार्यहरूको संकलन। यो कागजात हो आवश्यक सबै ग्राफिक डिजाइनरहरूको लागि, यसले तपाईंलाई तपाईंको शैली, अनुभव र प्रोजेक्टहरू देखाउँदछ।
पोर्टफोलियो होशियार हुनुपर्दछ, भिजुअल हुनुहोस्। दिमागमा राख्नुहोस् कि यो हो पहिलो प्रभाव के कारण मानव संसाधन विभाग। यो ग्राफिक डिजाइनर को पाठ्यक्रम vitae छ।
कल्पना गर्नुहोस् कि यो पोर्टफोलियो वेबमा पोष्ट गरिएको छ, कि ती सबै कम्पनीहरू वा ग्राहकहरूको लागि पहुँच योग्य छ ग्राफिक सेवा खोज्दै। दृश्यता छ र आफैंलाई ज्ञात गर्नु सफल हुनुको कुञ्जी हो। समाधान छ अनलाइन पोर्टफोलियो.
1 अनलाइन पोर्टफोलियो
हामी जान्दछौं तीन वेब तपाईंको पोर्टफोलियो दृश्य, सरल र अनलाइन तरीकामा सिर्जना गर्न। यसले पाठ्यक्रम भिटाएको रूपमा कार्य गर्दछ, त्यसैले हामीले गर्नु पर्छ परियोजनाहरु छान्नुहोस् व्यावसायिकता प्रेषणको लागि उपयुक्त छ र तपाईंको उम्मेद्वारलाई स्तर दिन्छ।
यो एक प्लेटफर्म हो जसले हामीलाई दुई दिशामा मद्दत गर्दछ। सबै भन्दा पहिले, यो एक राम्रो हुन सक्छ हामीलाई प्रेरित गर्न संसाधन, अनुसन्धान र लाखौं डिजाइनको साथ आँखा ट्रेन। अर्कोतर्फ, हामी यसलाई पोर्टफोलियोको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं हाम्रो काम प्रदर्शन गर्नुहोस्.
बेहनस एक समुदाय हो जुनसँग धेरै लोकप्रियता छ, यो छ विश्वभरि लाखौं व्यक्तिहरू द्वारा दैनिक भ्रमण गरिएको.
यस प्लेटफर्मको एक कडा पोइन्ट त्यो हो सबै प्रकारका फाइलहरू अपलोड गर्न अनुमति दिन्छ, कि छ, हामी छविहरू, gifs, भिडियो, अन्य बीच समावेश गर्न सक्छौं। कुनै श doubt्का बिना, यो हाल सिफारिसहरू प्राप्त गर्नका लागि बजारमा अवस्थित रहेको सब भन्दा सिफारिश हो।
यो अर्को बारे हो डिजाइनरहरूको लागि समुदाय। रेजिष्टरिंग पूर्ण रूपमा नि: शुल्क छ, तर हामीसँग शुल्क तिरेर बढी सेवाहरू र फाइदाहरू हुने सम्भावना छ।
यसले हामीलाई पनि सेवा दिन सक्छ प्रेरणाको स्रोत। जब हामी प्लेटफर्ममा दर्ता हुन्छौं, यसले हामीलाई डिजाइनका विभिन्न शाखाका फ्रीलांसरहरू र कम्पनीहरूको पालना गर्ने अवसर दिन्छ।
हामीले जोड दिनुपर्दछ कि ड्रिबलले हामीलाई हाम्रो पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, तर यसले खोज्न मेनूमा सेक्सन पनि गर्दछ नौकरी प्रस्तावहरू। संक्षेप मा, यो एक रोजगार बोर्ड छ जहाँ दुबै उपयोगकर्ता र कम्पनीहरु यसलाई व्यावसायिक प्रयोग गर्छन्।
यस प्लेटफर्मको मुख्य सेवा नि: शुल्कका लागि अनलाइन पोर्टफोलियोको सिर्जना प्रदान गर्न हो। धेरै छ प्रयोग गर्न सजिलो र हामीलाई हाम्रो ठाँउमा एक पेशेवर टच दिन विषयवस्तुहरू प्रदान गर्दछ। यो यसको आकर्षक उपस्थितिको लागि बाहिर खडा छ।
एक भन्दा बढी समावेश गर्दछ मिलियन दर्ता पोर्टफोलियो र दुई लाख भन्दा बढी परियोजनाहरू संलग्न छन्।
हामी तपाईंलाई सिफारिश गर्दछौं कि तपाईले प्रत्येक पोर्टफोलियोमा हेर्नुहोस् तपाई आफैले निर्णय लिनुहोस् कुन एक उत्तम तपाइँको प्रोफाइल सूट। यदि तपाईंसँग समय र इच्छा छ भने, एक भन्दा बढी प्लेटफर्ममा उपस्थित रहनाले तपाईंलाई थप दृश्यता दिनेछ, तर होशियार हुनुहोस् कुनै उपेक्षा छैन तिनीहरूबाट।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » तपाईंको अनलाइन पोर्टफोलियो सिर्जना गर्न तीन उत्तम वेबसाइटहरू
एफिनिटी प्रकाशक नि: शुल्क बीटा अब उपलब्ध: InDesign को एक वास्तविक विकल्प